मधेस प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको अन्त्यसँगै इतिहास रचेको छ । आठौ अधिवेशनमा २० वटा सभाको बैठक सञ्चालन भएको छ । अधिवेशनको आठौं बैठकको दोस्रो बैठकबाट प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी टुङ्गो लागेको थियो ।
सलहेस फूलबारीमा भारतीय धार्मिक पर्यटकको घुइँचो
लहान –१२ र २२ नम्बर वडामा पर्ने सलहेस फूलबारीमा बैशाख १ गते नयाँ वर्षमा लाग्ने मेलामा दुई दिन अघिदेखि भारतीय धार्मिक पर्यटक आउन थालेका छन् । भारतीय पर्यटकले फूलबारी भरिभराउ छ । विगत दुई वर्ष कोरोना कहरको कारण भारतको विहार उत्तरप्रदेश पश्चिम बङ्गालबाट आउन नपाएकाले यसवर्ष दुई दिन अघिदेखि नै आउन सुरु गरेको सलहेस फूलबारी मेला समितिका सदस्य तथा लहान –२२ का वडाध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले बताउनुभयो ।
रौतहटमा ८६ हजार ९७४ मतदाता थपिए
वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि रौतहटमा चार लाख सात हजार ९७२ जना मतदाता रहेका छन् । २०७४ सालको स्थानिय तहको निर्वाचनमा तीन लाख २१ हजार १८ मतदाता रहेका थिए । यस वर्षको निर्वाचनमा थप ८६ हजार ९७४ मतदाता थपिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीका लागि १० दिने तालिम मंगलबारबाट शुरुभएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वर, गौशाला तथा बर्दिबासमा एकैसाथ १० दिने म्यादी प्रहरीका लागि तालिम दिन शुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
ट्रकको ठक्करले स्कुटी चालकको मृत्यु
ट्रकले स्कुटीलाई ठक्कर दिँदा स्कुटी चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका ७ बस्ने अन्दाजी वर्ष ६० को कन्हैयाबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।
एकसय ५० जना किसानलाई टिनको ड्रम वितरण
कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले गहुँ ब्लक क्षेत्रमा गहुँ खेती गरेका एक सय ५० जना कृषकलाई गहुँको बिऊँ जोगाएर राख्न एक एक थान ड्रम वितरण गरेको छ । पर्साको पर्सागढी नगरपालिका २ झब्राहामा आयोजित कार्यक्रममा गहुँ ब्लक क्षेत्रमा गहुँ खेती गरेका कृषकलाई गहुँको बिऊँ जोगाएर राख्न ड्रम वितरण गरेको हो ।
पाेखरीमा डुबी एक बालकको मृत्यु
सप्तरीको विष्णुपुर गा.पा. वडा नं.२ सिमराहा टोलका एक बालकको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ईन्द्रदेव यादवको आठ वर्षीय छोरा देवराज यादव आफ्नै मामा घर गएको राजगढ गापा वडा नं.४ स्थित सार्वजनिक पोखरीमा नुहाउने क्रममा पोखरीमा डुबेका थिए ।
सप्तरीको बिष्णुपुर गाउँपालिका २ सिमराहा टोलका एक बालकको पानीमा डुवेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ईन्द्रदेव यादवको ८ बर्षिय छोरा देवराज यादव आफ्नै मामाघर गएको राजगढ गा.पा. ४ स्थित सार्बजनिक पोखरीमा नुहाउने क्रममा पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको हो ।
मिथिला भोजन (खाना) प्रतियोगिता तथा प्रदर्शनी सम्पन्न
मिथिला भोजन (खाना) प्रतियोगिता तथा प्रदर्शनीमा मिथिला थाली पस्केर प्रदेश नं. १ को प्रिमियर कलेज अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, दमक विजयी भएको छ । पहिलो स्थान हाँसिल गर्ने प्रतियोगीले तरुवा, कढी, करेला भुजिया, सोइजनको तरकारी आँपको अचार, मखानले झाँनेको दाल, मखानको खीर र भातसहितको मिथिला थाली पस्केर अतिथिहरुको मन जित्न सफल भएको हो ।